सबैले आस मा’रेकी श्रीमतीलाई यसरी बचाए….:::यी भगवान रुपी श्रीमानलाई सलाम छ..! – Gorkhali Dainik
October 5, 2020 333
काठमाण्डौ। निकै भलादमी देखिने पुरुषहरू पनि घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुदाँहुँदै बाहिरी सम्बन्धमा रहने, श्रीमती र छोराछोरीलाई दुःख दिने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने गरेका घटना आजभोली दिनहुँ जसो बाहिर आइरहेका छन् ।
यद्यपि बाहिर आएका घटना एकाध मात्रै हुन् । दोब्बर, तेब्बर घटना भित्रभित्रै लुकाइन्छन् । इज्जतको डरले बाहिर ल्याइदैनन् । तर गुल्मी धुरकोट, पिपलधार घर भएका विनोद खड्का भने एउटा यस्ता उदाहरणीय श्रीमान् हुन्,
जसले श्रीमान् हुनुको महत्व र कर्तव्य दुवै कुरा प्रमाणित गर्दैछन् । विवाहको मण्डपमा अग्नीलाई साक्षी राखी, सात फेरा घुमेर, सात जन्म संगै हुन गरेको कबुल अनुसार निर्देशित छन् । उनलाई देख्ने जो कोहीले भन्छन्, ‘श्रीमान् हुन् त यस्तो ।’ २०७२ सालको बैशाख २४ गते विनोद र अनिता वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए । त्यो मागी विवाह थियो ।
सायद विनोद र अनिताको सुखद् जीवन दैवलाई रुचेन । अनितालाई एक्कासी टाउको दुख्ने रोगले सताउन थाल्यो । उनीहरूले चेकअप गराए । चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि खान थालिन् अनिता । औषधिले सायद काम गरेन । उनलाई ब्रेन हेमरेज भयो । त्यो घटनाले विनोदले सारा खुशी र सपना ऐना फुटेसरह टुक्राटुक्रामा परिणत भएको महसुस गरे ।
तर पनि श्रीमतीलाई जसरी पनि बचाउने अभियानमा लागे । श्रीमती बिनाको जीवन अधुरो सोचिसकेका उनले पैंसा, समय, हेरचाह जे–जे आवश्यक पर्छ, सबै जोहो गर्ने अठोट गरे । र लागे राम्रो भन्दा राम्रो उपचारको खोजीमा ।
“देवीको रुपमा घरमा भित्रिएकी थिइन् । मेरो बुबाआमाले पनि औधी माया गर्नुहुन्छ । अनिताको व्यवहार पनि निकै मायालु छ” विनोद भन्छन्, “श्रीमान्ले आफ्नी श्रीमतीलाई इज्जत र माया दुवै दिनुपर्छ । श्रीमान्ले माया गरे सबैले माया गर्छन् ।”
अनिताको प्रवेशले घर परिवारमा माया, ममता, सुख सबै भित्रिएको बताउने विनादे उनी बिरामी भएपछि परिवार तितरबितर भयो भन्छन् । बुबाआमा गाउँमा, छोरी फुपूहरूसंग । आफू अनिताको स्यारसुसारमा । अनिताका बुबाआमा पनि ज्वाइँसंग निकै खुशी छन् ।
छोरीले भगवानजस्तो जस्तो श्रीमान् पाएको भन्दै छोरीको लागि आफूहरूलाई कुनै चिन्ता छैन भन्छन् । विनोदको मायाले नै छोरीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेको भन्दै उनीहरू भन्छन्, “ज्वाइँ होस् हाम्रो जस्तो, श्रीमान् होस् त विनोदजस्तो ।”
अहिलेसम्म देश बिदेश बाट सहयोगी मनहरुले गरेको सहयोगले यो अवस्था सम्म आयौ अझै नौ दस महिना हस्पिटलमै बस्नुपर्ने भएकोले अब कसरी बस्ने हस्पिटल या घर फर्कने यही कुराले पिरोलिरहेको बताउदै अझै पनि देश बिदेशमा रहेका मनकारी दाजुभाइ दिदी बैनिहरु बाट सहयोगको अपिल गरेका छन, आज भने धेरै पछी यि जोडीको मुहार केही खुशी देख्न पाइयो, उनिहरु सङ्ग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नका लागि तलको लिन्क मा क्लिक गर्नु होला !
Prevदिपालाई छाडेर किन करिष्मा लिनु पर्यो मुद्रेको स्पष्टिकरण….!
Nextयी ४ ठाउँमा कालो कोठी भएका व्यक्तिसँग हुँदैन धनको कमी….